Wifi Hack ခြင်သူတွေအတွက်...မျှဝေလိုက်ပါတယ် ~ online ချစ်သူ (နည်းပညာ နှင့် သတင်း)
online ချစ်သူ (နည်းပညာ နှင့် သတင်း)
ကို 2013.Mar 27 ရက်နေ့ တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
ဖုန်း Root လုပ်နည်း
Wifi Hack ခြင်သူတွေအတွက်...မျှဝေလိုက်ပါတယ်
17:01 lwanthumyotaw No comments
ဥပမာ BT5 ကို boot လုပ်စရာမလိုပဲ window အထဲမှာပဲ run လို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးပါ။
ဖိုင်ဆိုက်ဒ်ကတော့ 455MB ရှိပါတယ်။ ကျနော် ၅ ဖိုင်ခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။
Part 1 ။ Part2။ Part3။ Part 4
အသုံးပြုပုံကို vedio ဖိုင်လေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဟက်ကင်းဆိုင်ရာမတတ်ပါ..မေးမြန်းခြင်းသည်းခံစေလိုပါတယ်..
ကျွန်တော်ဆိုဒ်ကို လာလည်တဲသူငယ်ချင်းများကို အမြဲတမ်းကြိုဆိုပါတယ် သူငယ်ချင်းများအားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ သတိ//onlineချစ်သူသည် ဘာတစ်ခုမှသိတာ တတ်တာမရှိတဲအတွက် မေးမြန်းချင်းသိခံပါ ကျွန်တော်ဆိုဒ်က copy တွေယူပြီးမျှဝေတဲ့ဆိုဒ်ဖြစ်တဲအတွက်ကြောင့်ပါ မိမိတိုယူချင်တာရှိရင် ယူသွားနိုင်ပါတယ် download လင့်တွေသေနေရင်းလည်း Cbox မှာပြောသွားပါဗျာ အားလုံးကျေးဇူးတင်၇ှိပါတယ်ဗျာ
မိမိတို့ ရဲဘလော့ကိုအမြဲမြန် သွပ်လွပ်ဆန်
:Phone Application (5)
1Tab Cleaner နဲ့ Android (1)
Android ဆိုင်ရာ (10)
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (9)
Daily Key (1)
ံHTML ဆိုင်ရာ (1)
IOS နဲ့ဆိုင်သမျှ (1)
Nokia ဖုန်းဆိုင်ရာ (1)
photoshop နည်းပညာ (11)
video သတင်း (1)
ကိုယ်ပိုင် ၀တ်ဆိုဒ် လုပ်ရန် (1)
ဖုန်း Root လုပ်နည်း (9)
အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာ (2)
အထွေအထွေ ဗဟုသုတ (1)
Facebook Like လေးဖြင့်အားပေးပါ
ESPNဘောလုံးသတင်းစုံ My-Goalဘောလုံးသတင်း myanmar ဘောလုံးသတင်း ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ချလ်ဆီးပရိပ်သတ်အတွက် လီဗာပူး ပရိပ်သတ်အတွက် မြန်မာ့ဘောလုံးချစ်သူဆိုဒ် နိုင်ငံခြားပွဲစဉ်ရလဒ်များ
ထိုင်းငါးဖမ်းစက်လှေတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေး ဆိုးဆိုးရွားရွား နိမ့်ကျနေတဲ့ အကြောင်း ILO က သတိပေးလိုက်တဲ့ အကြောင်း၊ ကချင် လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ဒွဲဘူရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အပေါ် သဘောထားအမြင်၊ ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ငြိမ်းအေးရေး ကြိုးပမ်းချက်နဲ့ ထိပ်တန်းရောက် ဆီးရီးယား အရေး စသည် .....
♥♥ ♥online ချစ်သူ♥ ♥♥. Powered by Blogger.
သူငယ်ချင်းတိုရဲ Mail aလးထားခဲပါ အသစ်တင်တိုင်း Mail ဖြစ်ပိုပေးပါမယ်
ကျွန်တော်ဆိုဒ်ကို ဖုန်းကနေဖတ်ချင်ရင် app ကိုဒေါင်းယူပြီ ဖတ်နိုင်ပါတယ်ခဗျာ
ဒေါင်းရန်ဆော့ဝဲလ်လေးများ ကာလာအိုကေဆိုလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေး အင်တာနက်ဒေါင်းလော့ မန်နေဂျာ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် MP3 သီချင်းချုံ့ရန်ဆော့ဝဲလ်များ facebook သုံးရတာအရမ်းလွယ်တဲ့oovoo.exe လေးပါ စိတ်ဝင်စားရင်ယူသွားလိုက်ပါ နည်းပညာ စာအုပ် မြန်မာလို အပိုင်း(၁) နည်းပညာ စာအုပ် မြန်မာလို အပိုင်း(၂) နည်းပညာ စာအုပ် မြန်မာလို အပိုင်း(၃)
ကိုသေရမဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုရပါတယ် သီချင်းလေးတွေကို code အဖြစ်ပြောင်းပေးတဲ့ဆိုဒ် ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတောင် ချက်လို့ ရတဲ့နေရာလေးပါ Gtalkကဓာတ်ပုံကို slideshowပြမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ မိမိရဲ့password ကလုံခြုံမှုရှိရဲ့လား
ဂျီမေးလ်passwordမပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလည်း Gmailထဲမှာကိုယ့်ကိုဘလော့ထားလားသိချင်ရင် Gtalk/Gmailနည်းပညာ အလုပ်များချင်ရောင်ဆောင်သူအတွက်Gtalk Autoစာပြန်စနစ်
DVD/CDကူးတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ Window8အသုံးပြုနေသူများအတွက် ပသုံးပြုနည်းစာအုပ် Window 8 မှာ Start Menu မပါရင် ယူသွားပါ ဖုန်းထဲမှာသုံးဖိုနှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန်
computerတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်(မြန်မာလို lT Ebook) 80+free Ebooks From Microsoft(မြန်မြန် Down ထားကြပါရန်) Samsung phone ကဘက်ထရီမခံလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်နည်းလမ်း Advanced SystemCare Pro 6.1.9.215 Final Datecode 17.1.2013
သီချင်းများကို တောင်းဆိုလိုပါက မိမိ၏ Gtalk တွင်
ကို အပ်ပြီး တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Copyright © 2011 online ချစ်သူ (နည်းပညာ နှင့် သတင်း) | Powered by Blogger